Veli…kibay • AoRaha
Impiry tokoa moa no niantsoantsoana fa tsy misy afa-tsy didy jadona sisa no ahafahana mampihatra ny lalàna velona eto amintsika. Fanimpiriny ireo hetsika fanentanana ho amin’ny fampahatsiarovan-tenan’ny tsirairay, na amin’ny fandotoana ny tanàna ka manentsina an’ireo lakandrano fivarinan’ ny rano, na ny fanelingelenana ny fifamoivoizana miteraka fatiantoka noho ny varotra amoron-dalana tsy ara-dalàna!
Santionany amin’ny hita maso manoloana ny fanaovana tsinontsinona ny lalàna ireo voatanisa ireo, manomboka any amin’ny mpitondra hatreny amin’ny isam-baravarana. Tsy laitran’ny balan-drafananarana intsony isika satria efa nilentika tao an-doha ny hadrohadron’ny vahiny tamin’ny famaritana ny tanindrazantsika ho firenen’ny moramora.
Efa ela no niandrasana ny fampidirana an-tsehatra an’ireo mpitandro filaminana ireo. Ambanana miaraka amin’ny vava basy sy ambenana toy ny omby sisa isika mianakavy vao mahalala ny tokony atao sy voarara. Diso ny famendrofendroan’ny sasany hoe toy ny miverina tany amin’ny vanim-potoana fahagola isika, fa taloha anie ka nohajaina na ny tain’omby mivadika aza e! Amin’ny alalan’ny fampitahorana sisa, eny fa tahaka ny fitaizana zazakely mihitsy, vao mba raiki-tahotra Ramalagasy. Mety handroso sy hivoatra ihany isika raha voavoly an-tsain’ny rehetra ny maha zava-dehibe an’izany fanajana ny lalàna izany. Tsy maintsy mandalo amin’ny endrika jadona toy izao ny famerenana amin’ny laoniny an’izany tany tan-dalàna izany. Manomboka amin’ny kely indrindra, toy ny fampianarana miampita arabe, ka hatramin’ny goavana indrindra. Tery vay manta hitondra soa no atao. Sady maro ihany anie no faly sy mankasitraka rehefa mahita sady mahatsapa ny vokatry ny hetsika fampanarahan-dalàna e! Inoana fa handavan-taona izao asa arahim-piniavana sy fahasahiana ataon’ireo manamahefa isan’ambaratongany izao. Aoka hipaka eny anivon’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana ny Nosy ny baiko, na toromarika, amin’ny fampanarahana-dalàna tsimialonjafy. Ho fitaratra fotsiny Antananarivo renivohitra, ary tsy kajikajy politika fa “vely kibay” hamerina any fahamendrehan’ny isam-batan’olona. Inona tokoa moa no antenaina amin’ny vahoaka maditra? Satria azo antenaina fa tsy ho voarebirebin’ny mpanao politika intsony izy ireo rehefa hendry sy fatra-panaja lalàna, ka samy vonona hifantoka tanteraka amin’ny fampandrosoana amin’izay. Enga anie…